Maxkamad caddaaladda Europe oo gaartay go’aan ka dhan ah haweenka muslimiinta | GURIGA HAWEENKA
Home » DIINTA » Maxkamad caddaaladda Europe oo gaartay go’aan ka dhan ah haweenka muslimiinta
Maxkamad caddaaladda Europe oo gaartay go’aan ka dhan ah haweenka muslimiinta
Maxkamadda Caddaaladda Midowga Europe ayaa sharci ka dhigtay in shirkaduhu ay ka mamnuuci karaan dumarka u shaqeeya inaysan xiran Qamaarka madaxa la saarto,
Waa kiiskii ugu horreeyay oo dumarka muslimiinta xuquuqdooda laga horyimaado inay ku shaqayn karaan xijaabka.
Maxkamadda ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay inay goobaha shaqada ee Europe ay mamnuuc ka tahay in qofku uu soo xirto calaamado muuqda oo muujinaya Diin, Siyaasad iyo wax lamid ah.
Laba shaqaale oo haween ah oo ku kala sugan Belgium & France ayaa kiiskan maxkamadda ECJ keenay kaddib markay diideen inay qamaarka madaxda ka qaadaan.
Labada gabdhood middood waxay u shaqaynaysay shirkadda G4S taasoo sharciga shirkaddaas uu dhigayo in qofku uusan xiran karin calaamado diin muujinaya ama siyaasad ama falsafad kale.
Gabadha kale waxay ahayd lataliyaha dhinaca IT-ga waxaana loo sheegay inay qamaarka madaxa ka qaaddo waana diiday iyaduna.
Shirkadda G4S oo khilaafka arrinkan uu soo bilowday sanadii 2006 markii hore sharcigoodu kuma qornayn in shaqaaluhu uusan xiran karin calaamado muujinaya xisbi siyaasadeed, diin ama falsafad kale, laakiin sharciga shaqaalaha ayaa wax laga baddalay markay dumarka ka shaqeeya shirkadda bilaabeen inay xijaab xirtaan.
Inkastoo sharcigani uu saamayn doono dad badan maxkamaddu waxay tiri, “Go’aankani maaha mid lagu cunsuriyaynayo ama lagu bartilmaammeedsanayo Islaamka iyo diimaha kaleba”.
Gabadha shaqaalaha ah ee ku sugan France oo ah injineerad xagga naqshadda ee shirkadda Micropole, ayaa laga codsaday inay joojiso xirashada xijaabka ama qamaarka, laakiin waa diiday inay dhigto qamaarka.
Maxkamaddu ayaa go’aanka kaddib waxay dib ugu celisay maxkamadda France si arrintan ay u meel mariso oo go’aanku uu yahay mid sax ah iyo dib u eegis in lagu sameeyo shuruudaha shaqada ee dalka France.
Previous: Luul: Champion of women and youth empowerment in Somalia
Next: Europe’s right hails EU court’s workplace headscarf ban ruling